HomeWararka CiyaarahaNewcastle United 2-0 Arsenal: Magpies oo Spurs Qarka u Saartay u soo bixitaanka Champions League
May 17, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Gool uu iska dhaliyay Ben White iyo gool uu dhaliyay Bruno Guimaraes ayaa Tottenham qarka u saaran inay u soo baxdo Champions League iyadoo Arsenal ay guuldaro 2-0 ah kala kulantay Newcastle United.
Gunners ayaa u baahneyd guul si ay dib ugu soo laabato kaalinta afaraad iyadoo hal kulan oo Premier League ah laakiin Newcastle ayaa guul weyn ka gaartat taasi oo caawisay Spurs.
Difaaca reer England ee Ben White ayaa iska dhaliyey gool bilowga qaybta labaad, markaas oo kubbad uu doonayay inuu goolkiisa ka difaaco uu si kama’ ah ugu leexiyey shabaqiisa isaga oo weydaariyey goolhaye Aaron Ramsdale oo badbaadin badan sameeyey.
Shan daqiiqadood oo kali ah markii ay ka hadhsanayd dhamaadka ciyaarta ayay Newcastle United dhalisay gool labaad oo uu u saxeexay xiddiga reer Brazil ee Bruno Guimarães, waxaanay sidaas ku xaqiijisatay Arsenal in ay booskoodii afraad ee ay muddada kusoo jireen ay uga tanaasuleen Tottenham.
Arsenal ayaa waxay hadda ku jirtaa kaalinta shanaad oo ay ku haysato 66 dhibcood, waxaanay laba dhibcood ka dambeeyaan Tottenham oo afraad fadhiya iyadoo horyaalkana ay hal ciyaar oo kali ahi ka hadhsan tahay, taas oo haddii ay nasiib leeyihiin ay Spurs kufi doonto, iyaguna ay badin doonaan.